Ake sithi nesakhiwo samahhovisi. Ngo eziningi amawindi ehhovisi, ugesi ufakwe kuphela ebumnyameni. Futhi kukhona amakamelo lapho azikho amafasitela. Lapha, ugesi ivuliwe ne ukufika umsebenzi wokuqala futhi ivaliwe lapho ushiya yokuhlanza lady ebusuku.
Futhi uma you ngokuzuma noma uvala amandla kagesi ngenxa yokulimala, isibonelo, umlilo? Yini abasebenzi? Ebumnyameni pitch kuphunywe isakhiwo? Lapha ku eziphuthumayo ezifana, futhi ngaphansi komthetho wamanje khona ehhovisi, esikolweni, zezimboni, ishede kanye nezakhiwo zokuhlala imithombo ezizimele sokukhanyisa. Ilambu LED eziphuthumayo ukukhanya nge battery kufanele ibekwe nje kuphela endleleni batakulana abantu. Kumele usethe esindisa ukuphila izindawo imishini kanye izakhiwo lapho okuyiwa zokucisha.
Isibani eziphuthumayo nge battery iwumthombo okunye ukukhanya, elinikeza ukukhanyisa kwezakhiwo, okuyinto ibalulekile endabeni Ukukhipha kukagesi. Usebenza mithombo yokukhanya kusukela amabhethri, okuyinto zizimele kusukela amapayipi. Bazokusiza ukuzulazula phelele cime sithole indlela aphume esakhiweni.
Kakade lantambama izibani, asebenzisa ama Fluorescent noma izibani incandescent ephelelwe yisikhathi ngokuphelele. ukukhanyisa LED enezinto eziningi Izinzuzo ebaluleke.
Okokuqala, spotlight LED Uzakukhanyisa ekamelweni elikhanyayo njengoba isibani ejwayelekile. Kodwa supply ugongolo ukukhanya kuyoba iyunifomu ngaphezulu, ngaphandle eshaywa futhi umbala lesifanele.
Okwesibili, LED eziphuthumayo ukukhanyisa isibani nge battery ibusa ugesi kancane. Kwimodi ejwayelekile, ke kunikwe amandla kusukela amapayipi, kodwa uma ukusebenza impendulo eziphuthumayo ezenziwa ibhethri, kusukela lapho inethiwekhi izimele ngokuphelele. Le imali yangempela kusuka lezi zalapho ihlolwe futhi eside ibalwa Ochwepheshe.
Okwesithathu, ngenxa ongaphakeme ukusetshenziswa zamanje kwesibani eziphuthumayo nge Ibhethri elishajekayo has inkathi ende sokuphila kwayo.
Okwesine, eziphuthumayo LED isibani izibani (izinhlobo kubo ingase ibe khona ehlukile) Ngaso sonke isikhathi, idivayisi ephephile futhi imvelo. Ezakhiwe ukuqukatha eziyingozi chemical compounds, Alloys nezinto ezinobuthi. Ngaphezu kwalokho, izibani musa ashisise, abenze ngisho ephephile eziphuthumayo.
Owesihlanu ezifana eziphuthumayo ukukhanyisa imithombo abe inertia ongaphakeme. Ngokungafani nezinye imithombo ukukhanya, izibani LED kuhlanganisiwe kweso futhi ngokushesha anikeze ukukhanya okukhulu iyunifomu.
Ukukhetha LED eziphuthumayo ukukhanya nge battery, izici kanye nemingcele lobuchwepheshe imishini kudingeka ucabangele kuqala.
Stand-yedwa msebenzi. Amandla amabhethri kanye isibani kuzoncika ngqo futhi ukusebenza ezizimele kwesibani. Redundant segezi Kunconywa ukuba ukhethe amandla aphansi, kuleso simo baye balwela eziningi isikhathi eside. onobuhle Standard ezisebenzela amahora amabili kuya kwamahlanu, kodwa kukhona izibani lezi zinto "ukusebenza" ku ibhethri olulodwa kuze kuphele amahora ayisikhombisa.
Usayizi kanye ukuma isibani singasikhanyisela nhlobonhlobo. Akukho izincomo ikakhulukazi akukho.
Isikhombisi esibalulekile - degree of ukuvikelwa. Ibonisa kahle indlela ukukhanyisa iyunithi ithwala imvelo olumanzi noma angcolile. Wathi amagugu isibani ibe namadijithi angu ezimbili. Okokuqala - Inkomba of isivikelo uthuli nezinhlayiyana okuqinile, kanti eyesibili ibonisa ukuvikelwa umswakama. Ethandwa kakhulu emakethe namuhla - kungcono LED ukukhanya eziphuthumayo nge battery kanye nokuvikelwa IP 54. Iningi idivayisi yezokuphepha ine izimpawu IP 60 noma IP 65.
Inkomba umbala lokushisa. Ubizwa ngokuvamile eboniswa ku iphakethe noma isizinda. Max - 4000 Kelvin.
Kukhona izibani ehluke ngokuphelele LED eziphuthumayo ukukhanya nge ibhethri. Izinhlobo amadivayisi kuhluke kwimodi zabo zokusebenzela kanye nezici ezithile sokusebenza.
Izibani abasebenza ngokugcwele (unomphela).
Amadivayisi afakiwe kuphela uma kungekho amandla inethiwekhi kagesi (non-unomphela).
Izinketho imishini ukukhanyisa nge izindlela nokusebenza amaningi (kuhlangene). Ngo thuluzi izinkanyiso ezimbili eyakhelwe. Omunye isebenza njalo, wesibili icushiwe kuphela uma eziphuthumayo.
Leli qembu akunakubangelwa spotlight ephathekayo futhi amathoshi. Ziyakwazi kakhulu, uma kukhona isidingo isikhathi ukuveza ezinye ebusweni emsebenzini wokuhambela amagatsha endaweni ukuqeda zokugwema ukuphuka nokunye. N. Ngokuqondene ukukhanyisa amadivayisi ezinjalo, kungcono ukuba ukhethe nalawo aba namandla high namandla ukumelana. Kwezinye izikhathi hhayi okungaka, ibhethri ihlala ngesivinini esingakanani. Into ebalulekile ukuthi ukukhanyisa iyunithi engakaze acekela evacuates isixuku, okuyinto ivame ukuba ashiye indawo eyingozi.
Sithanda ukugqamisa izibani zangaphakathi for eziphuthumayo ukukhanyisa, okuyinto ukufakwa amafulethi izindlu zasemaphandleni. Ngo kumadivayisi ezifana kungenzeka ukulungisa ukugqama, kanye ukuxhuma motion izinzwa noma elawulwa kude.
Izinhlobo izibani ngokuya ngendawo okuyiwa kuyo
isibani LED for eziphuthumayo ukukhanyisa ngebhethri, senzelwe ekhombisa amalebula ngolwazi (eziphuthumayo ophumayo, umlilo alamu, isitoreji, nokunye. D.).
Iinsetjenziswa zokukhwela ngen izinto eziqondile.
Umthombo ukukhanya indlela yokuphunyurha.
Amahora. Eliphezulu luminaire ukukhanya eziphuthumayo kumele kanembeza "umsebenzi" amahora eziyisihlanu kuya kweziyisikhombisa.
Mount Uhlobo. Kuye nohlobo lwekamelo ungasebenzisa odongeni, ophahleni noma idivayisi ilenga.
Ungenantambo isibani LED kungase azigcini nje ngokuhluka ukusebenza kanye nokusebenza, kodwa kube nezindleko. Small izibani LED ephathekayo abiza umthengi ruble 800. Lantern ngoba babasa icebo engadini kungadla ruble kunamasonto angaba amakhulu amathathu. izimpawu esikhanyayo nameplates ibe nenani ezisukela 500 ruble 1100.
Manje ake sixoxe kangakanani ngeke Kubiza odongeni / ophahleni / elengayo LED eziphuthumayo ukukhanya nge ibhethri. Intengo iyahlukahluka kuye udumo yomenzi, izinga imishini kanye izingxenye. Ngokwesibonelo, onobuhle Canadian-kukhiqizwa kukhona eziyisithupha ukuze anesithoba amawaka. Industrial izibani eziphuthumayo ukukhanyisa zokukhiqiza Russian izobiza umthengi in inani komunye ukuze ibe yizinkulungwane ezintathu. Lapha konke kuzoncika ubukhulu namandla ibhethri bese uhlobo isibani.
Ukwahlulela ukubuyekezwa, ukukhanya zalapho eziphuthumayo elishajekayo kungukuthi nje bophulwe esimweni esiphuthumayo. Bakhandwa ikakhulukazi ukunconywa abanikazi izindlu zasemaphandleni kanye nezindawo suburban, lapho ugesi wawuhamba akukhona okungavamile ukuba likhithike.
Khuluma kahle amakhasimende is LED izibani, siphawula ukuphila kwabo isikhathi eside, eliphezulu, ukuphepha ukusetshenziswa kanye yokonga ehloniphekile ku ugesi izikweletu.